Umama akazange afune ukusebenza kum. Bambalwa abantu bacinga ukuba imizuzu emithathu yesikrini ithatyathwa iinyanga ezili-12 ukuya kwezine. Andingathethi ngeendleko zengqondo. Kwaye ngamanye amaxesha kunjalo ngaphambi kokumemeza, esibhedlele ... ngoku ndiyaphantsi kwengcamango ukusuka ekuthunjisweni kwesithombe "Ndingcwabe ngasemva kwe-plinth", andiyikuyeka ukuhamba kwimoya apho. Oku kubangelwa ngumsebenzi kwifilimu yenkwenkwana eneminyaka eyisibhozo uSasha Drobitsko. Wadlala ngokugqithiseleyo, kodwa yintoni ekhoyo emva kwayo! Kwaye uMaria Shukshina, obomi bakhe bubonakala buphumelele, ukholelwa ukuba yonke into ebomini yakhe ayiyi kuza, kwaye uya kufumana ulonwabo lwakhe.
Abantwana kwiifilimu - ngokubanzi, ibali elihlukile. Abantu abaqhuba iingubo zabo ezintle ezigqobileyo, ezinobomi obunobuso obuhle kunye ne-invoyisi amehlo ukuhlola iimvavanyo, abazi ukuba ziphi. USasha waba nendima enkulu nangona umntu omdala. Ngokubhekiselele kumgca webali, iqhawe lilwanyana elityhiliweyo, lisulwa ngumama okhuni, inkwenkwe eye yangena kuye yindoda encinane. Umdlali omncinci wayephinda ahlaselwe kwiimeko ezinzima kakhulu.
Ngokomzekelo , umlawuli uSergei Snezhkin wandivimbela ngokwenene - ndadlala umama kaSasha - noSvetlana Kryuchkova, benza ngokucacileyo indima kagogo, bathetha nomfana baze bafike naye. Abantwana emva kokuba bonke bangakwazi ukunyaniseka ebomini, kunzima kubo ukubonakalisa ubunyanisekileyo kunye nokuthotywa. Ngako oko, nayiphi na inkxaso yerhwebo elincinci yayingekho. Oku kubonakala ngathi bukhohlakali, ngokwenene bubulumko bombhali. Naluphi na ukubonakaliswa kovelwano kwinqanaba lethu kunokunyanga yonke into - inkwenkwe "yayiyonciphisa, inyibilike."
Ewe, sasikhathazekile ngoSasha ebomini. Ndandifuna ukumkhathaza, ukuzisola ... Akukhona nje ukuba emfanekisweni wokukhaba kwakhe konke, ngoko ke nakwiindawo zokuphuka, ukuthetha kwabantu, awukwazi ukuthetha! Ngelinye igama, ngelinye ilanga andinakukuma kwaye ndihamba ngaphaya. Ndakhangela ngeenxa yokuqala - kwakungekho mntu ujikeleze. "Sasha," ndithi, "ungumntu onobuqili, onetalente." "Ewe, kuyinyaniso?" - amehlo akhe ayelumkile ngokwenene. - "Kakade! Nkosi, iSashenka ... "Emva koko umlawuli wesibini womfanekiso ubonakala:" UMaria Vasilyevna, kakuhle, uyazi, uSergei Olegovich andivumeli ukuba ndiye kwinkwenkwe! "" Andizange ndithethe ilizwi kuye! Kudlula nje. " "Ngaphambili? Ewe, yiya kuwe ... "
Into ebunzima kakhulu yayinguMaria Shukshina, obomi bakhe obungenalo ngokwaneleyo ukuze athole lonwabo, ngokuqinisekileyo lowo uSvetlana Nikolaevna Kryuchkova uchithwa. Isangqa esinjalo seCaucasian - umama uyazihudula, kodwa ugogo naye akayeki. Yonke into yokutshatyalaliswa kobuqhetseba babonakala belibale ukuba bayidonsa umntu ophilayo ... Kucacile ukuba le nkwenkwe mayihlale ikhala. Kwaye kungekhona nje ukuba udibanise ngamanye amaxesha, kodwa ukulwa nabakhohlisi bokwenene, u-squeal, kwaye iinyembezi, njengoko zithi, amaqoqo. Kunzima nakwabadala abadala ukuba banqume kwisakhelo. Yintoni ongayithetha ngayo ngabantwana? .. Ngo-Sasha ekuqaleni basebenzisa indlela eyintandokazi yabenzi befilimu-bayondla umntwana osweleyo ngesardadi.
Kwaye kwakudingeka ukususa amanani amaninzi athatha. Ewe, umzuzu weza xa uSasha wabuyisela enye i-mustard, kwaye umntwana waqala ukupheka: "Akukuphela kwe-mustard! Ndiza kuzihlawula! "Kodwa" ngokwakhe ", alas, ayizange isebenze.
Kukhona enye into emnandi kakhulu yezinyembezi - ipensele yengqondo. Bayekezela amehlo enqabileyo - kunye nokukhala kukaJaroslavna! Intlungu ibuhlungu ngenxa yokuba iinyembezi zichitheka umthombo.
Xa inkwenkwe engamahlwempu, eyayingazi ukuba yintoni le pencil, yathi igama elithi "menthol", wavuma. Into eyona nto, wayekholelwa, yayikukugqithisa isardadi. Thina, abadlali abakhulu, babenomdla kuye, ngokuba ngokungafani naye sazi-ukusuka kwing menthol iliso lalingena ngaphakathi.
Kwaye ndambona umama uSasha, owayekho kwisiza. Ukumjonga kuye kwakusasa: le ntokazi yayingenasiphako, inobuso obuhlaza obuhlaza. Ndacinga ukuba yiyiphi intlekwano eyenzekayo ngoku emphefumlweni wakhe, kwaye wayezibuza ukuba uza kusebenza njani kwindawo yakhe ... Gcina umntwana ngokugubungela nokumemeza esithi: "Ukuthumelela nge-movie yakho!" Ngaba akunakwenzeka. Ingxenye yefilimu ithatyathwa, yinto enye kuphela ehlalayo - ukujonga indlela umntwana wakho evezwe ngayo intlungu ngenxa ye-movie enhle.
... Uyazi, imemori yinto engonakaliyo. Ndakhangela ubuso bukaSasha obonakele, ndaza ndikhumbula ibali lam ebuntwaneni. Inyaniso kukuba ndiyazi ngokwenene ukuba injani isardadi, ngakumbi ... xa uncinci, kwaye kukho ezininzi. Ndazibamba ngeempila zam. Ndandineminyaka emine xa umama enqumle ukungaxhatshazi kweli shishini. Ingxoxo malunga nendlela intombazana enhle ngayo ukuhamba neminwe enjalo, zingaphi izilwanyana eziphila phantsi kwe-marigolds, azizange zincede. Kwakudinga "ukuchithwa kwemishini". Indlela ayekhethileyo ngayo ininzi-wayifake iminwe yam isardadi. Ngendlela, kufuneka kuqatshelwe ukuba uLydia Fedoseyeva-Shukshina - umama akakho konke. Wayeqonda nje: ukuba awuyikuyeka yonke into ngoku, ungandibukeli umntu emva kwendoda yangaphambili ... Hayi, ebuntwaneni bam mna kunye nomkhwa wam ombi wancincikisa umama kunye neyeza lakhe lomntu. Kwakuyizothe ukwenza isardadi njengaye, kodwa ndenze! Unina olungakumbi akazange afake iimvavanyo ezinjalo kum, ngokucacileyo, ndaziqonda: nangona i-turpentine mazh - awuyi kuthanda! Wonke umntu uhamba ngeendlela zakhe ... Izipikili zam zihlahlela namhlanje ...
Nangona ukuvalelwa kwidrafti ye-Shukshin ayigcini kakhulu, kuba kukho abantu abalungileyo-abaculi abazenzayo. Kwimizuzu emibini ebomini bam, xa ndidlala amantombazana eendawo, kwafuneka ndibophe izipikili zam. Andizange ndiyithande le nkqubo, andizange ndibe ne-drop drop of manicure ixesha elide, ngoko ke iimpapasho zephicilizo eliphuzi zikhe zatshatyalaliswa ngokunyanisekileyo. Bhala ukuba uKsenia Sobchak wandise umlomo wakhe, kwaye uMaria Shukshina, obomi bakhe obungenakwanele ukudala ulonwabo ebomini bakhe, wandise izipikili zakhe. Andikwazi ukuma zonke iinkohliso, izipikili, kuquka!
Ngoko, malunga neli xesha kwi-cinema. Menthol menthol, kunye noKriuchkova kunye nam kufuneka ndiphubise umntwana osweleyo ... Ngokuqhelekileyo ndaqonda ngokucacileyo ukuba siya kususa njani ... Kakade, le nkwenkwe yayibuhlungu. Kwaye okokuqala kabini bazama ukudonsa uSasha kwiindlela ezihlukileyo zebhokisi, kungekhona ezandleni. Umqondisi wethu omangalisayo uSnezhkin wamemeza ngokukrakra: "Ngaba awuyiqondi ukuba kuvela ubuxoki, ukunyaniseka, akukho mntu uya kukholelwa?" Sitshana noNicovna, mna, ukuba ndiyincumise le nkwenkwana, ngokuqinisekileyo wambeka ingulube. Kungenxa yokuba i-double ifanele ibuyiselwe, kwaye kwakhona i-menthol, iinyembezi ...
Ngexesha elilandelayo sasiyibambe kanzima. Ikoyikeka. UMaria wazizwa ecaleni lobuqhetseba: Ndatsho, uSvetlana Nikolaevna uyakhalaza, amehlo omntwana atshisa nge-menthol, kwaye uyamemeza ukuba kukho amandla. Kwaye kwabakho enye ethatha, ngokuphindaphindiweyo ... Innokenty Smoktunovsky encwadini yakhe ayizange isibone ngesizathu sokuba ngokubhekiselele kwinani lezifo zengqondo abadlali baye bahlala ixesha elide kwaye bagcine ngokuqinisekileyo intendeni yobukhosi kwihlabathi jikelele. Sekunjalo ndithatyathwa, ukuba kwintsebenziswano yorhwebo esiya kuyo kanye emva koogqirha. Okokuthi, isigulane, ugqirha - yonke into isondele. Umnyama unjalo ihlaya.
... Kuhlala kukho abantu enkundleni, kodwa ngokokuqala ngangoko ndidutshulwa kwinqanaba, emva kokusebenza, elalizaliswe ngokuthula. Akukho mntu unokuthetha ilizwi. Kwakukho ukungafihli, okungacaci ukuba kwavela phi, kuba abantu ababelapho, baqonda: yinto nje ibhayisikobho, imbali, imbali.
USvetlana Nikolaevna waqalisa ukuvuselelwa kabini ngexesha lokudubula. Intliziyo ... Wazikhumbula ngokwakhe ibali elibi-ibali lokuthandana nothando olungumfazi ongavamile. Silindele ukuba abuyele esibhedlele, wathandazela ukuba yonke into iya kusebenza.
USasha wadlala ngendlela endala ebomini. Endaweni yabazali, ndiza kuphinda ndicinga ukuba ndiyamnika umntwana ukuba enze into ekhangayo ... kum meko enjalo, uhlala elwa nomama. Okokuthi, ngakwesinye icala, kuya kuba yintloni ukungafumani inkwenkwe eqaqambileyo kumaqabane atyunjwe kwabanye abantwana abangama-500. Ngakolunye uhlangothi, iimvakalelo zam ziphikisana. Kodwa uSasha wanikezwa ubusuku bonke ngenxa yokuba, mhlawumbi, ukuguquguquka kwengqondo yengane. Waqhelisa ababekwe kwaye waya kwikona lakhe ukudlala amathoyizi.
UMaria akazange afundise nabani na ikhono lomdlali, konke okukuyo, beza namava. Ngako oko, ngexesha lokuthatha indawo kaSasha ndimele abantwana bam abancinci. Makar, kubonakala kum, sele ndiyindoda yelinye ilungu leminyaka, uAnya - ngokubanzi ngumdala, ngoko ndacinga uTomas noFoku. Ndicinga ukuba ndingenabantwana bam, le nxaxheba ayinakusebenza. Abantwana bahlala kweli lizwe, kuba kungakhathaliseki ukuba kunjalo kunengqiqo kuneMoscow. Ngaphambi kweengxaki, kwakukho umsebenzi omningi, ngaphandle kokuphefumula, ngokoqobo. Ndabona uFoma noFoka ngokukhawuleza. Ewe, ndandithukuthele kwaye ndikhathazekile. UMaria wayekhumbula le nkxwaleko enkundleni. Nantsi into, isimangalo esinqabileyo: abantwana bam ehlabathini kunye nobaba, kunye nomfana, inkwenkwe enhle uSasha - ugogo ogugu kunye no-grandfather omkhulu, kwaye umama onqwenela ukungabi nethuba lokubona abantwana babo unesimo esifanayo. Tosca, njengoko kubonakala kum, ngokuqhelekileyo, ngowokuqala, kwaye ngowokugqibela. Kuphela kwimeko ye-movie kufuneka uyifudumise, njengoko kufanelekile, amaxesha amaninzi ehamba ngengqondo yakho. Ngoko ke, abalingisi bayakuxabisa amava, ngakumbi okuxhomekeke ekubandezelekeni. Ngenxa yokuba ungayisebenzisa emva koko. Ewe, inkohlakalo. Kodwa le nto yinto esiyisebenzayo ngayo.
Ihlobo lasekupheleni sasiqulunqa i-documentary malunga nobomi bukapapa, kwaye kwakukho ngeli xesha abantwana bam babekelelwe umsebenzi ukuba basuse i-adenoids. Ndandixhalabele ukuba andisayi kuba kufuphi noFoma noFoka, kodwa ukuphazamisa ukudubula, akukho mbuzo. Oku kuya kunzima kakhulu ubomi bezinye amalungu abasebenzi, ukuphazamisa ishedyuli, ukuvelisa abavelisi. Ngaloo ngqiqo, ndiyilumkisa kakhulu. Kwaye abantwana bam bafunda ukuhlala njengokuba ndandenza. Mhlawumbi iphela. Ndabona abazali bam abadumile kakhulu. Kwaye, ngokunyanisekileyo, andinakho ukukhumbula iinkumbulo zikaMama noTata ...
- UMaria, kwaye ukhalela ngokukhawuleza ifilimu?
- Ndineengxaki ezininzi ebomini kunye nendlela yokungafaki ukukhala. Inkqubo "Lindela kum", endikukhokelayo, ngamanye amaxesha inika ingqondo ngengxaki. Bark akunakwenzeka - i-makeup iya kuhamba, awukwazi ukuvuthela impumlo yakho - kuya kuba nomtshato ngesandi, njalo njalo. Ngoko ndizama ukuzigcina ngisesandleni. Kuphela xa beziphatha ngokungenzi nzuzo. Kwakunjalo icebo ... Sibhala umfazi owayekhangela unyana wakhe oneminyaka emibili ubudala. Ngokubanzi, amabali malunga nabantwana abalahlekileyo kukuba ndihlala ndiyingozi kakhulu. Kwaye lo mfazi undixelele indlela abahamba ngayo noyise wengane esitimeleni. Kwakukho ingxabano. Le ndoda yambamba umntwana oneminyaka emibini ubudala yaza yaphuma nayo kwipulatifomu. Akambonanga unyana wakhe ukususela. Ngokufanayo, sabhala indoda eyayixelelwa ngxabano kwisitimela. Nguye kuphela olahlekelwe ngumntwana. Ukugijima kwipulatifomu kunye nosana, loo mntu wayenomuzwa wokuthi ulahlekelwa yintliziyo. Wagula, umntu obizwa ngokuba yi-ambulensi, umntwana wathathwa kuye ngumphambukeli ... Kwabonakala ukuba bobabini abantu ebomini bafuna inkwenkwe efanayo. Saqala ukukhangela ibhinqa elalibambe iqhaza ekufeni kwentsana. Fu maneka. Wavuma ukuba wayemfake efestile kwindawo enye, kwisikhululo, kwaye akazange abubone kwakhona ... Le nkwenkwe yayisinye kwikhaya lezintandane, kodwa amagosa kunye nabanakekeli abazange basheshe bamthabathe ekuthuthweni kwethu. Ingane yayilungiselela inkqubo yokwamkelwa. Wonke amaphepha avela kubazali bakhe abathandwayo aqokelelwa, kwaye ukuba yonke into yayiphelile, unina noyise ngokwenene babengenakuyifumana!
Utitshala wezintandane waza wabonisa i heroine iifoto zeefoto ezininzi waza wammema ukuba afune yena. Abantwana beli minyaka bahluke kakhulu, kwaye intliziyo yam iyahlula - ngaba uya kukwazi ukwazi unyana wakhe? .. Owesifazane wayenomdla kakhulu, ngemizuzu elishumi wayesebenzisa iifoto zabafana. Ukuxhatshazwa kweso studio kwakunjalo kangangokuthi kwakubonakala sengathi idilesi iya kuqubuka. Ndandithuthuzela. Yaye wenza! Ndifumene, nangona ukuba ngaphezu kweyonyaka kudlule. Xa le podium yayisuswe kumntu omncinci, ndandingakwazi ukuma - ndaphula ngezinyembezi ndaza ndaleka.
Abantwana emva kwe-plinth kunye nabantwana kwifestile bayesabeka kwaye ngokwenene ...
Yintoni eya kwenzeka kwindodana kaJeanne Friske?
Ilayisi kunye ne-cranberries, i-carrot kunye ne-ginger
Uphuhliso olufanelekileyo lwabantwana
I-Horoscope yomhlaza ngomnyaka weger
UDmitry Kleiman akazange amxwayise uVictoria Daineko ukuba waqhawula umtshato